Ny Valosoa, 12 Aogositra 2017 (II). Ao Andapa ao, Antsiranana, Foulpointe, Ihosy… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Ny Valosoa, 12 Aogositra 2017 (I). Marc Ravalomanana-Toamasina, Fampihavanana (CFM), Krizy, vola …
« Basy atifi-kavana », Nitiah Nosy. →
Ny Valosoa, 12 Aogositra 2017 (II). Ao Andapa ao, Antsiranana, Foulpointe, Ihosy…
Publié le 12 août 2017 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
AO AN-DAPA AO
Isaky ny alarobia dia re fa misy fanovàna
Ireo tale sy olobe mitana andraiki-panjakana.
Alàna ny etsy , saingy indrisy, tsy mba vaovao no solony,
Fa toa ny tranainy ihany , izay “tsy taviny, tsy volony”.
Isaky ny alarobia dia re fa misy fanovàna.
(Atao toa vatona fanorona ny ao anaty fitondrana!)
Alahadahatra isan`andro , akisaka tsy am-piheverana,
Ary dia manjaka hatrany ny ady seza sy ady toerana.
Isaky ny alarobia dia efa tena igagàna,
Fa miteniteny foana ilay mba manam-pahefana !
Resaka tsy mampandroso no atolony sy entiny,
Hany ka dia “resin-tsampona” , fa kabary tsisy ventiny.
Isaky ny alarobia dia zendana ny iray tanàna,
Fa tsy misy zava-tsoa mivoaka an-dapam-panjakana.
Resadresaka an-databatra , izay no hany voizina ao.
Mifono fampiesonan-dava avy amin`ny hery vaovao.
DADAN`i ZINA (11-08-17)
Ho rakotra mpino sy mpanao pôlitika
Fotoan-dehibe any Antsiranana manomboka amin’ny herinandro ho avy io. Eo aloha ny fanokafana ny faha-50 taonan’ny Fjkm sy ny faha-200 taona nidiran’ny Lms teto Madagasikara hotanterahina ao Antsiranana. Fa eo ihany koa ny hetsika fanamarihana ny faha-15 taonan’ny antoko Tim izay hotanterahina any Antsiranana ihany koa aorian’io fotoana io. Efa vonona avokoa ireo mpikatroka Tim any Antsiranana, ho avy any an-toerana ihany koa ny avy aty Antananarivo sy ny manodidina, hotarihan’ny filohana nasionalin’ny antoko, Marc Ravalomanana. Milamina Antsiranana raha ny nambaran’ny ben’ny tanàna, Djabotozara Desiré tamin’ny mpanao gazety. Efa foana mantsy ireo zatovo maditra “Foroches” any Antsiranana, ary efa tamin’ny volana Mey 2016 no nihena ny isan’izy ireo . Fantatra fa izy ireo raha ny nambaran’ity ben’ny tanàna ity ihany, efa nandraisana fepetra ka efa maro no tonga saina. Milamina arak’izany Antsiranana handray vahiny manomboka amin’ny herinandro ho avy io , ary efa samy somebiseby avokoa ny rehetra.
Potika ny RN5 Toamasina, Foulpointe, Fenoarivo Atsinanana
Potika indray amin’izao fotoana izao ny lalam-pirenena faha-5 (RN 5) mampitohy an’i Toamasina sy Mahavelona Foulpointe, Fenoarivo Atsinanana, mipaka hatrany Soanieran’Ivongo iny. Toerana anisan’ny misarika mpizahatany sy mpiala sasatra koa anefa iny faritra iny, indrindra ny ao Mahavelona Foulpointe, noho ny ranomasina any milamina tokoa, anisan’ny ranomasina milamina eto amin’ny Nosy izy noho ny fisian’ireo vatohara misakana ny onja sy ireo biby masiaka any an-dranomasina any tsy ho tonga aty amin’ny morontsiraka. Velon-taraina noho izay faharatsian’ny lalana izay ireo mampiasa izany RN 5 izany amin’izao fotoana, voalaza fa anisan’ny fanambin’ny fitondrana amin’izao ny tsy hisian’ny lavadavaka intsony amin’ireo lalam-pirenena rehetra eto amin’ny Nosy, tsy izany anefa no misy amin’iny faritra Atsinanana sy Analanjirofo iny, fa toy ny Zanak’Ikalahafa izy ireo, tsy misy mpijery hatramin’izao izany lalana simba izany.
Tanterahana any Ihosy ny Fetin’ ny omby
Tanterahana any Ihosy any amin’ny faritr’Ihorombe amin’izao fotoana ny Fetin’ny Omby na ny Festival de Zébu. Mandritra ny 3 andro no anatanterahana izany hetsika izany, ifangaroan’ny kolontsaina sy ny fiharian-kerana dia ny fiharian-karena manodidina ny resaka omby, izay manana ny maha izy azy tokoa amin’iny faritry ny Bara iny. Ankoatra ny varotra fampirantiana ity biby fiompy ity, ho hita mandritra izao hetsika izao ihany koa ireo vokatra hafa mampalaza ny faritra Ihorombe, na eo amin’ny sehatry ny fiompiana izany, na eo amin’ny sehatry ny fambolena ihany koa, toy ny vary sy ireo haninkotrana isan-karazany.
Ny halatr’omby no tena vato misakana ny fampadrosoana ny faritra Ihorombe, anisan’ny hodinihana mandritra izao hetsika ara-toekarena sy ara-kolotsaina izao indrindra ny fitadiavam-bahaolana maharitra momba ny resaka asan-dahalo manodidina nny resaka omby.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué CUA Antananarivo, Fjkm, Flm Madagscar, Marc Ravalomanana, Tim Madagascar, Toamasina. Ajoutez ce permalien à vos favoris.